Fety sy fitaka be izao | NewsMada
Manomboka ny fety, manomboka ny fety. Izay ny azo ilazana ny fandiavana ity volana oktobra ity, efa miditra sahady amin’ny herinandro faharoa. Ao anatin’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra, ho amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena ihany koa ny eto amin’ny firenena.
Mangingina sy tsy maharototra loatra ny vahoaka ny andro roa voalohany, nanombohany izay. Eny fa na misy aza ny fety tsy andoavan-bola etsy sy eroa, miaro fizarana fitaovana maimaimpoana, tsy mahataitra ny ambanilanitra izany. Manomboka tokoa ny fety, ary andrenesana izany manerana ny faritra rehetra eto amin’ny Nosy. Fety politika ifangaroan’ny kabary tsara lahatra. Fety sy fitaka be izao anefa satria ny teo ihany no miverina. Teny efa fandren’ny sofina, tany amin’ny 20 taona lasa tany, ny mbola ventesin’ny ankamaroan’ireo kandidà ireo. Efa mankaleo ny olona indray aza ny mihaino azy. Tsorina fa mahamaika ireo vahoaka marobe ny fety aman-danonana sy ny fizaran-javatra fa tsy hiaino kabary feno fitaka.
Hanararaotra ny vahoaka amin’ity satria hanao fety sy fitaka be ihany koa izy ireo. Ho tonga tokoa ary hameno ny kianja malalaka rehefa hantsoina. Betsaka ny ho very amin’ny kajikajy satria hijery lanonana ny hahatongavany eo ary haka izay ho anjarany tsy azony hatramin’izay. Ho maro ireo kandidà ho diso fanantenana satria hamitaka azy ny mpandatsa-bato, hanao fety sy fitaka be.
Fotoana tokoa izao satria ho hipoka fanambatambazana sy fanehoam-pitiavana hataon’ireo mpanao politika, mpanao fety sy fitaka, ny tokantranon’ny tsirairay. Azo antoka fa hianjahanja eo izay tsy mitondra ny voatsirambin’ny tanany aloha. Mila vola sy fanomezana izao ny vahoaka fa tsy hovokisana kabary lavareny efa mahatofoka.